Fuqaradu ma helaan qoraallada heshiiska guryaha ee gacanta koowaad - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Fuqaradu ma helaan qoraallada heshiiska guryaha ee gacanta koowaad
La daabacay fredag 8 mars 2013 kl 16.40
Qiyaastii hal malyan oo ka mid ah bulshada iswiidhishka ayaa ah dan-yar aaney suurtagal u aheyn in hooy laga kireeyo ama ey helaan qandaraaska guryaha lagu kireeysto, sida ku cad war-bixin ay soo saartay hayadda hooyga Boverket.
Waxaa mar walba kor u sii kacaya shuruudaha la xiriira sidii lagu heli lahaa qoraallada heshiiska kireeysiga hooyga, sida uu boggiisa internet-ka ku qoray war-geeyska Di.se (Dagens Industri.se). Ma ahan wax qarsoon inay maanta cidda guri kireeynaysaa shuruud ka dhigto in ruuxa kirada dooneyaa uu mushaar ahaan u qaato mushaar saddex illaa afar jeer ka sarreeya kirada, inuu shakhsigu leeyahay summadda tobanka lambar ee dalka iyo in aannu ku jirin liiska hayadda liiska madow (kronofogden). Sida ay sheegtay hayadda hooygu in shuruudahaasi aaney ahayn kuwo ey ka soo bixi-karaan dadyoow gaarsiisan hal malyuun oo ka tirsan bulshada dalkan. Iyadoo ey caqabadda ugu ballaaran la soo gudboonaato dhallin-yarada iyo waayeelka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn.
Ma kugu adkayd inaad guri ka kireeysato Iswiidhen?
Aad iyo aad
Weli ma helin
Hayadda deegaanka iyo dhismooyinka
Hayadda guryaha (Boverket) waa hayad howsheedu tahay inay ka shaqeeyso sidii ey bulshada iswiidhen ku dhaqan ku heli lahaayeen hooy leh tayo wanaagsan. Hoowlaha ay hayaddu qabato ayey ka mid yihiin talo-bixin iyo dhabbo-tus la xiriirta dhanka ammaanka dabka guriga, nadaafadda, sawaxanka iyo qaabka dhismaha ee guryaha deegaannada iyo dhismooyinka kale.